Insimbi Engagqwali Ikhishi isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu Khipha Spray
Ikhaya / Ikhishi Faucets / Donsela phansi Izicucu / WOWOW Brushed Steel Kitchen Mixer Tap - Khipha Isifutho
I-WOWOW Brushed Steel Kitchen Mixer Tap - Khipha Isifutho
Donsela phansi isikulufu sokudla ekhishini: kukuvumela ukuthi ulawule amanzi ngesandla esisodwa futhi ufinyelela esedlule ukucwila ukuze uqedele imisebenzi ekhishini eyengeziwe.
Ukuhlelwa kwesikhiphi sekhishi kwenza isikhala sakho sasekhishini sibe lula futhi sisisha, silula ukuthwala ukucwila okuningi.
2311901 imiyalo yokufaka
Donsela ngaphandle Sprayer Ikhishi ompompi 2311901 nge-Escutcheon: ipuleti lokuzikhethela lokufaka ukufakwa okungu-1 noma oku-3 komgodi, akudingeki ukuthi Ukhathazeke ngezinkinga zeGap ezimbi; Ukuphakama kwe-Spout: 16.1 ″, Spout Reach: 7.8 ″, Deck Length: 9.6 ″; I-Brushed Nickel Surface Ingamelana Nokuqothulwa kwansuku zonke, okungekho ukugqwala.
Ukufika kwaMagnetic: isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu sisebenzisa uzibuthe oqinile ukuze uthinte isifutho sekhishi ku-Position ngakho-ke ihlala idokodo futhi ayihambi isikhathi ngokufana neminye ompompi basekhishini
3 Umsebenzi Donsela phansi I-Spray Head: Izintambo zokugeleza / zokufafaza / zamanzi okugeleza kwamanzi, amanzi ahlukile asemanzini a-Amandla Amandla okugeza Ngokushesha, i-Neoperl ABS yaseshashalazini ingasuswa ngohlamvu lwemali Lula ukugeza uphinde ushintshe
Ikhwalithi enhle: I-spout engagqwali yensimbi, umzimba we-zinc Metal, ukuqina kwesiQinisekiso sokuqina, ukukhululeka kwesibindi nokuhola, ukulwa nokuqhuma kukhipha i-hose (1.5 m), umshuwalense we-tucai Nikeza imigqa (0.5 m yawo wonke ama-mesh wensimbi engenacala).
Amakhethini wasekhishini ngokuvamile enziwa ngethusi, okuyisiketjana esinyene kakhulu sethusi emakethe. Kodwa-ke, ngenxa yezici zemvelo yasekhishini, amakhethini ahlanzekile ethusi akusona isinqumo esihle kakhulu. Zonke izisusa ze-zethusi ezimsulwa zakhiwe nge-electroplated engxenyeni engaphandle yangaphandle. Umsebenzi we-electroplating ukuvikela ukugqwala nokugqwala kwethusi ngaphakathi. Ikhishi linemithombo eminingi yamafutha, nezithambisi ezinamafutha nezokuhlanza ezandleni lapho kugeza izitsha ngokuvamile kuzodinga ukuhlanza isikulufu. Uma ungasebenzisi indlela efanele yokuhlanza, kungenzeka ukuthi uchithe ubumbeko lwephepheni, obangela ukuba isikevu sakhiwe futhi sibole. Uma ukhetha isikebhe esiphelele ekhishini lethusi, qiniseka ukuthi une-electroplating enhle kakhulu, ngaphandle kwalokho isikebhe sizobangela kalula ukugqwala nokugqwala. Isikhuhlu sokudla sendlu yangasese singumkhiqizo omuhle kakhulu!
SKU: 2311901 Categories: Ikhishi Faucets, Donsela phansi Izicucu Tags: I-Gooseneck Spout, I-Mixer Tap, Insimbi engagqwali
Izindlela Ezintathu: Imodi Yokushanela / Imodi Yokusakaza / Imodi Yokufafaza
I-WOWOW Best Donsela phansi ifenisha ekhishini ngoMagnet ...